နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး။ ။ ကောက်စပါးတစ်ခုလုံးပါသော အစားအသောက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း - Hello Sayarwon
နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး။ ။ ကောက်စပါးတစ်ခုလုံးပါသော အစားအသောက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
Nadi မှ ရေးသားသည်။ 16/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကောက်စပါးတခုလုံးပါသောထုတ်ကုန်များ က သင်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော် ကောင်းမွန်စွာရွေးချယ်ခြင်း သုံးခြင်းတို့ပြုလုပ်သင့်သည်။ အောက်ပါအချက်များက ကောက်စပါးအပြည့်ပါသော အစာရွေးချယ်နည်းဆယ်ချက်ကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
အစားအသောက်ပေါ်တိုင်းရှိ တံဆိပ်ကိုဖတ်ပါ။ ဆိုဒီယမ် ပြည့်ဝဆီ သကြားနည်းသောထုတ်ကုန် ကိုစားသုံးပါ။
ထိုအပြင် ပုံမှန် ပါဝင်ပစ္စည်းအစား ပြည့်ဝသော ဟူသောတံဆိပ်ပါသည်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ပါ။ဥပမာ ပြည့်ဝသော အစေ့ ကောက်စပါးပြည့်ဝစွာပါသောဂျုံ ဆန်အညို ပြောင်းဖူး တို့ကိုရွေးချယ်ပါ။ စပါးစေ့များစွာ အမျှင်ဓါတ်များခြင်း ၁၀၀% ဂျုံ ဆိုသောအရာများက ကောက်စပါးအပြည့်ပါသောအရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့အစာ သရေစာ နှင့် အကြိုက်ဆုံးအစာထဲတွင် ကောက်စပါးပြည့်ဝစွာထည့်ပြီးစားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာအောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
ကောက်စပါးပြည့်ဝစွာပါသောထုတ်ကုန် တွင် အနည်းဆုံး အမျှင် ၃ ဂရမ်အနည်းဆုံးပါဝင်ပြီး သင်ခန္ဓါကိုယ်အတွက်ကောင်းစေသည်။ ၅ဂရမ်ပါသောအရာများက ပိုကောင်းသည်။
ဂလူတန်တဲ့သော သူများက ကောက်စပါးပြည့်ဝစွာပါသောအစာများကိုရွေးချယ်စားနိုင်သည်။ သုံးမြှောင့်ပုံအပင် ကွီနိုးအာ ဆန်အကြမ်း ဂလူတန်မပါသောအုတ်ဂျုံမုန့် ဆန်အညိုနှင့် ပေါက်ပေါက်တို့ကိုလည်းစားသုံးနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်စွာထုတ်ထးသောအစားများကိုရှာပါ။ အမြင်လှပြီး အနံကောင်းသင့်သည်။ ဒိတ်ကုန်ရက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း နှင့် လမ်းညွန်ချက်ကိုကောင်းမွန်စွာစစ်ဆေးပါ။
စပါးစေံကို လေ အောက်စီဂျင်မထိအောင်ထားသင့်သည်။ သိုမဟုတ်ပါက မလတ်ဆတ်ခြင်း အနံဆိုးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုပြင် အေးသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်း နေနှင့်တိုက်ရိုက်မထိသောနေရာတွင်ထားခြင်းတို့လုပ်နိုင်သည်။
ပုပ်သိုးခြင်းမရှိသည်ဟုသေချာသော ကောက်စပါးပြည့်ဝဆီကိုလုံလောက်သောပမာဏဝယ်ထားပါ။ ကောက်စပါးပြည့်ဝစွာပါသောအရာများက ချက်ချင်းမစားခြင်း အကြာကြီးသိုလှောင်ခြင်းတို့လုပ်ပါက အာဟာရပါဝင်မှုကျစေသည်။
ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်တွင်ထုတ်ထားခြင်းလုပ်သင့်သည်။ ရေခဲသတ္တာတွင် ပါမုန့်သိမ်းထားခြင်းက ပုံမှန်အစိုဓါတ်ကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
ကောက်စပါးပြည်ဝစွပါသော ဂျုံမှန့်အများစုကို ရေခဲသေတ္တာတွင် ၆လမှ ၈လထိသိမ်းနိုင်သည်။ ချက်ပြုတ်ပြီး ဆန်အညိုက ၃ ရက်မှ ငါးရက် ထိထားနိုင်ပြီး ၆လထိခဲထားနိုင်သည်။
ကောက်စပါးပြည့်ဝစွာပါသောအစားများကကောင်းသည် ထိုအပြင် အထက်ပါအချက်များက သင်အစားအသောက်ပုံစံကိုကူညီနိုင်ရုံမက သင်ခန္ဓါကိုယ်ထိခိုက်မှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။
10 Tips: Choosing Whole-Grain Foods. https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-choosing-whole-grain-foodsAccessed February 19, 2017
10tipsfor purchasing and storing whole-grain foods. http://richland.osu.edu/sites/richland/files/imce/Program_Pages/SNAP-Ed/DGTipsheet22ChoosingWholeGrainFoods.pdfAccessed February 19, 2017
10 Tips For Choosing Whole Grain Foods. https://www.blissplan.com/mixed-bag/whole-grain-foods/Accessed February 19, 2017